Bashe bangqongqa abangani kugujwa usuku lokuzalwa - Ilanga News
Home Izindaba Bashe bangqongqa abangani kugujwa usuku lokuzalwa
Bashe bangqongqa abangani kugujwa usuku lokuzalwa
UBONE lukhulu uyise womfana waseMpophomeni, eHowick, oshe washona nabangani bakhe begubha usuku lwakhe lokuzalwa ngoLwesine kubo komunye wabangani bakhe.
Ngokuthola kweLANGA, uMsawawa Zulu (17), uLindo Duma (18) noSiya Nzimande bebehlangene kwaZulu bebase iringi yesitofu, beyixhume kugesi.
ILANGA likhuluma noMnu Zibonele Duma, onguyise kaLindo, uthe: “Ngifonelwe sengilele ebusuku ngitshelwa ukuthi sebeshe kabuhlungu kubo kaMsawawa lapho bebegubha khona usuku lwakhe lokuzalwa.
“Umuntu abathi ukwazile ukuphuma ngefasitela nguNah Nzimande, okunguyena otshele aba-ntu ukuthi bebebangaki endlini. Ngesikhathi ngifika, sizame eside isikhathi ukuvula isicabha kanti sivinjwe yibona njengoba bewe bonke ngasesicabheni.
“Sibaphuthumise emtholampilo esime isikhathi eside bengasivuleli waze washona uMsawawa.
“Sihlale ihora lonke silinde i-ambulance ukuba idlulisele lo owami noSiya esibhedlela. Izingubo abebezigqokile bezinamathele kubona, bengithi uma ngizama ukuzisusa esikhunjeni kuxebuke nenyama.
“Indlela abashe ngayo, bebengeke basinde ngoba sifike esibhedlela ethi uyagodola, ngakhumula ijakhethi ebengiyigqokile ngamembathisa yona. Ucele ukuba ngimphuzise amanzi womi-le, ngamnika ngesirinji,” kusho uMnu Duma.
UMnu Ntokozo Nzimande, onguninalume kaSiya, uthi babuhlungu ngokushona kwalaba bafana abebesabheke lukhulu kubona.
“Sisola ukuthi umlilo udalwe yileli puleti lesitofu abebesibasile ngoba bekungabafana abangaphuzi futhi bengabhemi,” kusho uMnu Nzimande.
Ikhansela lendawo, uMnu Sandile Khumalo, lithi le nto eyenzekile kule mindeni ibuhlungu kakhulu.
“Siyivakashele imindeni evelelwe yinhlekelele sihamba noNgqongqoshe wezokuThuthukiswa ko-Mphakathi KwaZulu-Natal (uNkk Nonhlanhla Khoza) onikele ngokudla kule mindeni nezingubo zokulala abazohamba nazo abantwana.
“Siyabonga nasemphakathini owathi uma uzwa isidumo wanikela khona wayosiza, bakhishwa abantwana endlini ebisha,” kusho uMnu Khumalo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa aseMpo-phomeni avule idokodo lophenyo ngalolu daba.
Previous articleUmhlonyane yikhambi ebelisetshenziswa
Next articleBadinwe yikhehla locansi lwesandla